Profile Company - Tianjin Tanggu TWT Madax Co., Ltd
TWT R & D kooxaha
TWT leeyahay R & D kooxaha u fiican farsamo sare, qalabaysan qalab sax sare R & xarunta D iyo xarunta imtixaanka, iyadoo in ka badan 50 sano of technology ururtay, R & D oo soo saarta tayo sare leh, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka waxyaabaha teknoolojiyad sare waa R & D Heerka TWT shirkadda. horumarinta TWT iyo wax soo saarka ee alaabta ayaa ku guuleystay in ka badan 20 shatiyada iyo daraasiin billado ah qaranka, oo waa aasaasihii ee Wasaaradda warshadaha mashiinada caadiga ah wax soo saarka biiyaha.
Waxaan ka fiirsan badbaadada alaabta iyo tayada lagu kalsoonaan karo sida Enterprise naftiisa, warshadaha Shiinaha waalka, Inaan Noqonay kuwii ugu helo ISO 9001 shahaadada soo saaray DNV: Certification System Tayada 2008; iyo waxaan sidoo kale helay Directive Qalabka cadaadiska EU 97/23 / EC (shahaado CE) iyo shahaado warshad by CCS.
Waxaan mar walba ku hawlanaa tababarka shaqaalaha farsamo si loo hubiyo in macaamiisha ku raaxaysan karaan adeegyada ugu fiican ee Warshadaha ee. xirfadlayaasha waa la-aragnimada hodanka ah ee loo xirxiro, debugging iyo dayactirka; iyo waxyaabaha la dayactir alaabada. Waxaana hubaal ah in aan aad la xidhiidhi kartaa oo ku siin aad jawaab 48 saacadood gudahood ka dib markii la helo cabashooyinka tayada ama codsi taageero farsamo ka macaamiisha at meel kasta oo adduunka ah. Waxaad si fiican u rumaysan kartaan, halkan, aad ku raaxaysan karaan adeegyo tayo sare loo arag.
nidaamka qiime Tani waa aasaaskii fikradaha iyo dhaqamada Company ayaa,
sida la mid ah sida marka la aasaasay TWT ee 1956.